जापानी कम्पनीले बनायो खल्तीमा अटाउने शौचालय ! - Samudrapari.com
जापानी कम्पनीले बनायो खल्तीमा अटाउने शौचालय !
टोकियो – एउटा जापानी स्र्टाटअप कम्पनीले खल्ती वा झोलामा राखेर यताउता लैजान मिल्ने शौचालय बनाएको छ । नागोया प्रिफेक्चरमा रहेको कोकेनावा इंकले सानो, पोर्टेबल शौचालय बनाएको छ । यो विश्वको सबैभन्दा सानो शौचालय भएको दाबी कम्पनीले गरेको छ ।
जापान विश्वमै सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक विपद् जाने स्थान हो । हरेक वर्ष यहाँ कयौं शक्तिशाली ताइफु र भुँइचालो जान्छ । न्यून तटिय क्षेत्र डुबानमा पर्ने वा बाढी आउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।
त्यसैले अधिकांश जापानीहरुले विपद्को समयका लागि भनेर विपद् किट तयार पारेर राखेका हुन्छन् । तर आकस्मिक शौचालय भने कमैसँग हुने गरेको छ । १६ दशमलव ९ प्रतिशत घरपरिवारसँग मात्रै आकस्मिक शौचालय भएको सन् २०१८ मा अनुसन्धान समूह जापान ट्वाइलेट ल्याबोले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।
जापानभर यो शौचालय विपद्को समयका लागि भनेर मानिसहरुले जोहो गरेर राख्ने सामग्रीको अभिन्न हिस्सा बन्ने आशा कोकेनावा इंकले गरेको छ । सन् २०१९ मा जापानमा हगिबिस नामक शक्तिशाली ताइफु गएको थियो । सो ताइफुको वितण्डापछि नागोयाको एउटा शहरमा स्वयम्सेवा दिने क्रममा कोकेनावा इंकका सीईओ योशिनोरी कोकेनावाको मनमा बोकेर यताउता लैजान मिल्ने सानो शौचालय बनाउने विचार मनमा आयो ।
त्यति बेला आश्रयस्थलमा बसेका मानिसहरुमाझ शौचालय प्रयोग गर्ने भिड र एक पटक शौचालय जान कम्तिमा पनि ३० मिनेट कुर्नु पर्ने अवस्था देखेपछि आफ्नो मनमा पोर्टेबल शौचालय बनाउने विचार आएको कोकेनावा बताउँछन् । यही समस्या समाधान गर्न कम्पनीले सन् २०२० मा ७ सेमी अग्लो ६.५ सेमी फराकिलो पकेट ट्वाइलेट बनाएको थियो ।
शौचालयमा हप्ता दिनसम्म दिशा पिसाब त्यसै राख्दा पनि कुनै दूर्गन्ध नआउने आफूले गरेको परीक्षणहरुले देखाएको पनि कम्पनीले बताएको छ । यी शौचालय खल्ती वा मेकअप ब्यागमै अटाउँछ । अहिलेसम्म कम्पनीले ५० हजार थान पकेटट्वाइलेट बेचिसकेको छ । रुसले अतिक्रमण गरेपछि विस्थापित युक्रेनीहरुलाई कम्पनीले ६ हजार ओटा त्यस्ता शौचालय दान पनि दिएको छ ।
हुन त प्राकृतिक विपद् वा अन्य आकस्मिक समस्या आइपरेको समयमा शौचालयको प्रयोग सबैको लागि समस्याको विषय बन्ने गरेको छ । मानिसहरुले यसलाई साथमै राख्ने र विपद् वा आकस्मिक समयमा प्रयोग गर्छन् भन्ने आशा आफूले गरेको कोकेनावाले बताएका छन् । -आर्थिक अभियानबाट
प्रकाशित समय: १७:३१:१३